စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
စစ်ဆင်ရေး 22 ~ 185 S ကtimeï¼
mounting Flangeï¼က ISO 5211ï¼ï¼ F07 / F10 / F12 / F14 / F16
AOX-မေးစက်မှုဇုန်လေးပုံတပုံများအတွက်ရရှိနိုင်ဗို့အား၏ 2. Wide အကွာအဝေးလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
ရေနှင့် explosionproof ပေးခြင်း o-လက်စွပ်စနစ်ဖြင့် 3. မျးခံဆောက်လုပ်ရေး။
4. Indicator AOX-မေးစီးရီးစက်မှုဇုန်လေးပုံတစ်ပုံနွေဦးတို့ကထောကျလျှပ်စစ် actuator turn
နှစ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးစက်မှုဇုန်လေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်နေသည်ဟုသူအတွက်နှစ်စဉ်တင်ပို့ခဲ့ကြပြီးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာရေကုသမှု, ရေနံ, လျှပ်စစ်မီး, ဓာတုနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuator turn AOX-မေးစီးရီးစက်မှုဇုန်လေးပုံတပုံများထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 60,000 လျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။ အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာ, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက်, ပလာစမာရေမှုန်ရေမွှားဂဟေဆော်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့လိုင်းနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများပါဝင်သည်။
ဆိုးကျိုး AOX-မေးစီးရီးစက်မှုဇုန်လေးပုံတပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေပေးချေသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်:
Q: တကယ်ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးစက်မှုဇုန်လေးပုံတပုံ၏အရည်အသွေးလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သည်ကိုမရကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအမိန့်တော်ရှေ့မှာနမူနာ get နိုင်သလား?
hot Tags:: စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်